डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थमा अनसन बसेका दुई युवा बिरामी भएपछि अनशन तोडे! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थमा अनसन बसेका दुई युवा बिरामी भएपछि अनशन तोडे!
दमौली : स्वास्थ्य अवस्था खराब बन्दै गएपछि दमौलीमा अनशन बसेका दुई युवाको अनशन तोडिएको छ। चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै अनशन बसेका दमौलीका सागर घिमिरेको स्वास्थ्य अवस्था क,मजोर बनेपछि चिकित्सकले अनशन तोड्न सुझाव दिएका थिए। अर्का युवा विनोद सापकोटाको
अवस्था सा’मान्य भए पनि घि’मिरेको स्वास्थ्य ख,राब भएको भन्दै चिकित्सकले सुझाव दिएपछि उनको अनशन तोडाइएको छ। उनीहरुलाई ला’यन्स डिष्ट्रिक्ट ३२५ बी १ का पूर्व गर्भनर एवं व्यास शिव पाञ्चायन क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष अशोककुमार श्रेष्ठले फलफूल र जुस खुवाएर अनशन तोडाए।
शुरुमा १९ घण्टे अ’नशन थालेका घिमिरे र हमालको अनशन विहान ६ बजे सकिंदैथियो। तर वि’हान उनीहरुले थप २४ घण्टा अनशन बस्ने निर्णय गरेका थिए। थपिएको समयमा समस्या भए पछि उ’नीहरुले दिउँसो अनशन तोडेका हुन्।
अनशन तोड्नासाथ घिमिरेलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। उनलाई दमौली अस्पतालमा लगेर स्लाईन चढाइएको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार भैरहेको अभियानका सदस्य सुनिल श्रेष्ठले जानकारी दिए। अन्नपूर्ण पोस्ट बाट
Previous खानपानमा विशेष ध्यान दिए क्या`न्सरबाट बच्न सकिन्छ : मन्त्री ढकाल,हेर्नुहोस।
Next कुलमान र गोबिन्द केसीको समर्थन गर्दै राजाराम पौडेलको उग्र आ`क्रोश, हेरेको हेरै भए पुण्य(भिडियोसहित) ,हेर्नुहोस।